F | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » F	17
Posted by Thint Aye Yeik on Jan 7, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.., History, My Dear Diary | 17 comments
စကားလုံးများကို တို့ထိခဲ့သည်မှာ F သို့ တိုင်ခဲ့လေပြီ။
F နေရာသို့အရောက်မှာ တိုက်ဆိုင်စွာပင် တာရာမင်းဝေ၏ ခေတ်နေအတွက်စာတစ်ရွက်ဆိုသည့် စာအုပ်ကို ဖတ်လိုက်မိသည်။
ဆရာတာရာမင်းဝေကတော့ မိတ်ဆွေဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ”သူအိမ်ထောင်ပြုလိုက်တာဟာ သူ့မိတ်ဆွေတွေရဲ့ဘဝထဲကနေ ပျောက်ဆုံးသွားရသလို ခံစားပြီး”ရေးထားသည်။
ကျွန်တော့်မှာလည်း မိတ်ဆွေဆိုတာနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုစရာလေးတွေ ရှိပါသည်။
F ဆိုသည့်စကားလုံးနှင့်ပတ်သက်၍ စဉ်းစားလိုက်သည့်အခါတိုင်း Friend ဆိုသည့် သူငယ်ချင်းများအကြောင်းကို မစဉ်းစားမိဘဲ မနေနိုင်ပါ။
Friend ဆိုသည်မှာ ကျွန်တော်တို့အာလုံးအတွက် ဘဝ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်သည့်အပြင် တစ်ခါတစ်ရံတွင် ကိုယ့်ဘဝကို တစ်နေရာရာဆီ ရောက်သွားတဲ့အထိ ပို့ဆောင်ပေးတတ်သည့် ယာဉ်တစ်စီးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးသည်။
ကျွန်တော်တို့ သက်ရှင်နေထိုင်မှု အဝန်းအဝိုင်းထဲမှာ မိတ်ဆွေဆိုသူများသည် မဖြစ်မနေ ကြုံဆုံပတ်သက်ရသည့် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။
တချို့က မိတ်ဆွေကောင်းများကို ရွေးချယ်ပတ်သက်ခွင့်ရသည်။ တချို့ကတော့ သိပ်မကောင်းလှသော မိတ်ဆွေများနှင့် သံယောဇဉ်ဖြစ်ကာ ပတ်သက်မိကြသည်။
ကျွန်တော့်ဘဝမှာလည်း မိတ်ဆွေအမျိုးအစားများစွာ ရှိနေသည်။
ကျွန်တော့်ကို ပိုတိုးတက်ကောင်းမွန်စေချင်စိတ်ဖြင့် ဘယ်လိုကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်ပေးရမလဲ ဆိုပြီး စေတနာထားတတ်သည့် မိတ်ဆွေများလည်း ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်အတွက် ကျနော် ကျေနပ်ပါသည်။
သို့သော် ကောင်း/ဆိုး နှစ်တန် ဒွန်တွဲနေသော လောကသဘာဝအရ ကျွန်တော့်ကို တုပြိုင်တိုက်ခိုက်နေပြီး ကျွန်တော်ပြိုလဲယိမ်းယိုင်သွားတာကိုမြင်မှ ကျေနပ်တတ်သည့် မိတ်ဆွေတချို့ကိုလည်း ရခဲ့သည်ပဲ။
ကျွန်တော့်အရှုံး ကျွန်တော့် အားနည်းချက် ကျွန်တော့် ယိမ်းယိုင်ပြိုလဲမှုကို သူတို့က ပျော်ရွှင်စွာ စားသုံးချင်ကြသည်။
ကျွန်တော့် ပျော်ရွှင်မှု ကျွန်တော့် အောင်မြင်မှုများကိုတော့ သူတို့ မနာလို မရှုစိမ့်နိုင်စွာ အံတကြိတ်ကြိတ်ဖြစ်တတ်သည်။
သူတို့ ကျွန်တော့်အပေါ် ဘယ်လို သဘောထားနေသလဲ ဆိုတာကိုပင် ကျွန်တော် ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း သိမြင်ခံစားမိလောက်အောင်ထိ ပွင့်ထွက်ပြတတ်ကြသေးသည်။
အဲ့သည်လိုအခါမျိုးမှာ ကျွန်တော် တွေးမိသည့်အတွေးမှာ—
ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းသည့် မိတ်ဆွေအတုယောင်မျိုးတွေကို
ဘယ်သူတရားပျက်ပျက် ကိုယ်မပျက်ပဲ နေပြမယ် ဆိုသည့်အတွေးဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်ဆီမှာ ကျွန်တော့်အတိုင်းအတာနဲ့ကျွန်တော် မာနဆိုသည့်အရာလည်း ရှိထားသည်။
ကျွန်တော့်ကို မျက်နှာကပြုံးပြီး စိတ်တွင်းက ကောက်ကျစ်စွာ ဆက်ဆံတတ်သည့် ထိုမိတ်ဆွေတုများကို ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးခြင်းက ပြဿနာ မဟုတ်သော်လည်း သူတို့ ကျွန်တော့်ကို မနာလိုမရှုစိမ့်ဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်ကျရှူံးအောင် ပြောဆိုပြုမှုကို သည်းခံခြင်းကတော့ ကောင်းသည့်ရလဒ် မထွက်ချေ။
သူတို့ ပျော်ဖို့ ကျွန်တော် ပြိုလဲ ပေးရမှာလားးး
အဲ့သည်လောက်သာ သည်းခံစွမ်းအားမြင့်မားလျှင် ကျွန်တော် တောထွက်နေတော့မပေါ့။
ကျွန်တော် ချစ်ခင်လေးစားသော အမေစု ပြောဖူးသည့်စကားတစ်ခွန်းကို သတိရသည်။
“ကျမကို ခဲတွေနဲ့ပေါက်မှ ထမင်းစားရမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ကျမက ခဲနဲ့အပေါက်ခံဖို့အသင့်ပါ”တဲ့။
ဒါပေမဲ့ အမေစုက သူ့ကို ခဲနဲ့ပေါက်မှ ထမင်းစားရမယ့်သူတွေအတွက် စွှန့်လွှတ်အနစ်နာခံပေးတာ ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေအတုအယောင်းများကတော့ ခဲနဲ့ပေါက်မှာမဟုတ်ဘဲ ကျွန်တော့်နောက်ကျောကို ဓါးနဲ့ ထိုးမှာ ဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့် သူတို့သည် စားနိုင်သောက်နိုင်သူများဖြစ်ပြီး သူတို့ထမင်းသူတို့စားပြီး ကျွန်တော့်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကို မြင်ချင်သူများဖြစ်သည်။
ဒါတော့ ကျွန်တော် သည်းမခံနိုင်ပါ။
အဲသည်နောက်တော့ ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဟောသည်လို မိတ်ဆွေအတုအယောင်များကို ကျွန်တော့်ဘဝထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်ဖို့သာ ရှိသည်။
ကိုယ့်အပေါ် မကောင်းစိတ်ထားသော ကိုယ့်ပျက်စီးရာပျက်စီးကြောင်းကြံစည် ပြုမှုတတ်သော မိတ်ဆွေတုများကို တစ်လွှာချင်း စစ်ချပြီး တဖြည်းဖြည်းချင်း ဖယ်ခွါကာ~~~ဘဝထဲကနေ ဖယ်ထုတ်ပစ်ရမည်။
ကျွန်တော့်အနား ကပ်လာပြီး ပြုံးရွှင်သောမျက်နှာ+ကောက်ကျစ်သော အတွင်းစိတ်ဖြင့် ဆက်ဆံတတ်သည့် ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေအချို့ကို ”ကျွန်တော့်ဘဝထဲမှ ပျောက်ဆုံးသွားသော မိတ်ဆွေများ”အဖြစ် စာရင်း သွင်းရပါတော့မည်။
တကယ့်တော့ ~~~ ကျွန်တော့်ထံတွင် ထိုသို့သောအခြေအနေမျိုးဖြင့် ပျောက်ဆုံးသွားသော မိတ်ဆွေများ ရှိခဲ့ဖူးပါသည်။
ဒါပေမဲ့ ကိစ္စ မရှိပါ။
အဲ့ဒါသည်~~~ကျွန်တော့်အတွက် ဆုံးရှုံးမှု မဟုတ်ပါ။
ပျောက်ဆုံးသွားသော မိတ်ဆွေတုများအတွက် ကျွန်တော် နှမြောတသစွာ ဝမ်းနည်းတမ်းတနေလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျွန်တော့်ထံတွင် ကျွန်တော့်ကောင်းကျိုးကို လိုလားသည့် မိတ်ဆွေစစ်များ ကျန်ရှိနေပါသည်။
ထိုမိတ်ဆွေစစ်များကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် ကြီးစွာသော ဆုလာဘ်ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေကောင်း မိတ်ဆွေဆိုးဆိုသည်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတတ်သည့်အသိနှင့် မိတ်ဆွေဆိုးမှန်းသိတာနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ဖယ်ခွါ ဥပေက္ခါ ပြုလိုက်နိုင်သည့် ပြတ်သားမှုလည်း ကျွန်တော့်ဆီမှာ ရှိနေပြီ။
အူးမြောက်မြောက် - ( Book.E) says: အဲလိုပြတ်သားမှုမျိုး နှစ်ဆယ်ဘိုးလောက် ပြန်ရောင်းစမ်းပါလား
alinsett says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12381
ဇီဇီခင်ဇော် says: ဆက်ဆက် ပြောတာတွေအကုန် သဘောတူတယ်။
ဒီနှစ်ထဲမှာ ကိုယ့်ကို ခင်တွယ်လို့ထက် အချဉ်ဖမ်းချင်လို့ ပေါင်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေကို ဖယ်မယ်။
ခင်ဇော် !!! ဘာမှတ်နေလဲ။
နာ့ မအ ဘူးမြန်း မှတ်နေလားး
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး အမုန်းမခံ လူ့အောက်ကျို့လို့ လူမပိ ဆိုပေမဲ့လည်း
စိတ်ဓာတ် ကို အဖိခံရတတ်တယ်။
အဲတော့ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီးလည်း အနိုင်မခံနိုင်ဘူးး
မိတ်ဆွေမစစ် ၁၀ ယောက်ထက် ရန်သူစစ်စစ် တစ်ယောက်ကို သာ အလိုရှိတယ်။
မမဂျီးဘဝ ဆို ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်တောင် သူများလိုက်ချော့နေရတဲ့ဘဝပါ။
alinsett says: လူ ပိတာက အပိခံနိုင်ပါသေးးး
စိတ်ဓါတ်ကြီး ပြားသွားတာ မာနကြီးကျိုးသွားတာကမှ အတော်ခံရခက်တာ နော့
ဇီဇီခင်ဇော် says: မိတ်ဆွေတုနှင့် မိတ်ဆွေစစ်။
alinsett says: ဒီ စာရင်း ကြည့်ပြီး စစ် ထုတ် ဖြတ် လုပ်ရင် အတော် ဟုတ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဗျို့။
Kaung Kin Pyar says: အောက်ဆုံး စာကြောင်းမှာတော့ လောကဓံက သင်ပေးလိုက်တဲ့ပညာတွေကို မြင်လိုက်ရတယ်….
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်.. ကိုယ့်အားနည်းချိန်ဆိုတာ.. အတုကို အတုသပ်သပ်.. အစစ်ကိုအစစ်သပ်သပ်ဖယ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ အချိန်လဲ ဖြစ်သေးတယ်….။
alinsett says: Kaung Kin Pyar says – ကိုယ့်အားနည်းချိန်ဆိုတာ.. အတုကို အတုသပ်သပ်.. အစစ်ကိုအစစ်သပ်သပ်ဖယ်ထုတ်ပေးနေတဲ့ အချိန်လဲ ဖြစ်သေးတယ်…
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .အဟမ်းး သူများကို ကောင်းစေချင်ရင် ကိုယ်က ဆိုးပြရတယ် ချာတိတ်။ မကောင်းတဲ့ မိတ်ဆွေကို ရတယ်ဆိုတာ တကယ်တော့ ကိုယ်ကမဆိုးခဲ့လို့ပါ။ ဒါကြောင့် အားလုံးထက် ကိုယ်က ပိုဆိုးပြလိုက်တဲ့နည်းနဲ့ သူများတွေကို ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့နေရာကို ရောက်အောင်ပို့ပေးရသကွဲ့။ ဒါမှ မိတ်ဆွေကောင်းပီသတယ် ဟီးဟီး။
alinsett says: အဟမ်း… ဒီအစ်မတော်ရဲ့ အတွေးတွေကတော့….အမြဲတမ်း ဂျွမ်းပစ်နေတော့တာပဲ… ကျနော်လည်း အထိုက်အလျောက်တော့ …ဆိုးခဲ့သလားလို့… ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7172
Mike says: OXFORD dictionary မှာတော့ ဒီလိုဆိုသကွ….
Friend / n. person, usu. not relation or lover, who feels mutual affection and regard for another; sympathizer, helper; person who is not an enemy.
.တော့ တော်တော်ပျော်ရွှင်မိသကွ…ဒညင်းဝက်တစ်ယောက်လည်း သူငယ်ချင်းကောင်း၊ .မိတ်ဆွေကောင်းတွေနဲ့ နှစ်သစ်မှာတွေ့နိုင်ပါစေ…ဒေါ်စုပြောဖူးသလို“အတိတ်ရဲ့အကျဉ်းသားအဖြစ်မခံပါနဲ့”လို့………. .မကောင်းမခမ်းမိတ်ဆွေ
alinsett says: ဟုတ်တယ်နော်… သူ ကောင်း မကောင်း ဆိုတာ…ကိုယ်က ဘယ်ပေတံနဲ့တိုင်းသလဲ…ဆိုတာလည်း.. ရှိသေးတယ်။ ဆရာတော် ဦးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရ)ရဲ့ ဆုံးမစကားလည်း..ရှိတယ်လေ…
သူ့ကို သဘောမကျရင်… ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင် ပြင်…တဲ့…
သူ့သဘောထားထက်…. ကိုယ့်သဘောထား ဘယ်ပုံဖြစ်နေတယ်ဆိုတာက ပိုအရေးကြီးတယ်ထင့်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1680
အောင် မိုးသူ says: Fake
alinsett says: ဟုတ်ပါ့…. တချို့….တချို့က … Fake တွေ..
ဦးကြောင်ကြီး says: အက်ဖ်ယူစီကေ
alinsett says: အိုက်တော့ အနော်က ကပြရမှာလား